आयात र निर्यात के हो? यस्तो भारत, चीन, रूस र जापान रूपमा निर्यात र आयात देशहरूमा
व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ठीकै देशहरूको आर्थिक र सामाजिक विकासको लागि एक शक्तिशाली stimulant सकिन्छ। यसलाई आफ्नो अवस्थित प्रविधि लगानी, मानव र प्राकृतिक स्रोतको आधारमा सबैभन्दा आफ्नो उद्योग र कृषि लागि लाभदायक मा अमेरिका को विशेषज्ञता ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्छ। यसको सैद्धान्तिक आधार आफ्नो मा XVIII सताब्दी अंग्रेजी अर्थशास्त्री Davidom Rikkardo मा उत्पन्न तुलनात्मक लाभ को सिद्धान्त छ "को प्रकृति र राष्ट्र को धन को कारण मा पूछताछ।"
वैश्विक अर्थव्यवस्था देशहरूमा लागत प्रभावी र पछि निर्यात सामान र सेवाहरू को उत्पादन मा विशेषज्ञ विकास गर्न सक्षम बनाउँछ। यस मामला मा हामी ठूलो परिमाणमा र राम्रो गुणस्तरको व्यावसायिक उत्पादन केही प्रकार बनाउन अनुमति दिने, देश को सापेक्षिक फाइदाहरूको बारेमा कुरा गर्दै छन्।
निर्यात देखि विदेशी मुद्रा आय संग, देशहरूमा अन्य देशहरूमा आयात तिनीहरूको महंगा उत्पादन प्रतिस्थापन गर्न सक्षम छन्। फलस्वरूप, यो विश्व अर्थव्यवस्था मा उत्पादन को कुल लागत कम गर्छ। यो ठीक रचनात्मक सकारात्मक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार को गतिशील विकास लागि भूमिका छ विश्व अर्थव्यवस्था को। निर्यात र देश को आयात, यसरी, अधिक सुरिलो र देश को तीव्र विकास हो।
सिद्धान्त मा, राज्य एउटा बन्द अर्थव्यवस्था या त जहाँ सम्पूर्ण आर्थिक जटिल मात्र घरेलू बजार गर्दछ, र आयात र गैर-अस्तित्वहीन वा खुला को निर्यात हुन सक्छ। जहाँसम्म तपाईंलाई थाहा रूपमा, आजको संसारमा एउटा यस्तो अर्थव्यवस्था विशुद्ध सिद्धान्त मा अवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ। राज्य को असली अर्थव्यवस्था त्यहाँ एउटा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार छ, खुला छ। यो वैश्विक अर्थव्यवस्था अझ यसको प्रभावकारिता योगदान, श्रम अन्तरराष्ट्रिय विभाजन फाइदा लिन अनुमति दिन्छ। विदेशी आर्थिक गतिविधि राज्य नियमन र उत्तेजित जो राष्ट्रिय आय वृद्धि, वैज्ञानिक र प्राविधिक प्रगति बढाउने यस्तो निर्यात र आयात, निर्धारण गर्छ।
अर्थव्यवस्था इनडोर र आउटडोर
अमेरिकी, जर्मनी र चीन: सबै भन्दा ठूलो निर्यातकहरु बीचमा तीन छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मा आफ्नो शेयर प्रभावशाली छ। यो क्रमशः 14.2%, 7.5%, 6.7% छ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार को विकास को लागि संभावनाहरु बारेमा बोल्ने, यो विकसित देशहरूमा धीमा को संभावना उल्लेख गर्नुपर्छ। तर त्यहाँ एकै समयमा विकासशील देशहरुमा गतिविधिको विकास हुनेछ। हालसम्म, विश्व व्यापार मा आफ्नो शेयर 34% छ, तर 10% द्वारा यसको शेयर वृद्धि गर्न अपेक्षा गरिएको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मा विकासशील देशहरुमा को revitalization मा सीआईएस देशहरुमा एक मूर्त भूमिका हुनेछ।
आयात र निर्यात कस्तो छ?
कल बिक्री विदेश प्रयोगको लागि सामान र सेवाहरू विदेशी ठेकेदार निर्यात। तदनुसार, आयात विदेशी ठेकेदार द्वारा विदेश बाट सामान र सेवाहरू को वितरण उल्लेख। विदेशी आर्थिक गतिविधि, अर्थात्, आयात र निर्यात, बाहिर राज्य नै र यसको व्यापारिक संस्थाहरूको द्वारा दुवै लगे छ।
विदेशी व्यापार मा राज्य संलग्नता को डिग्री को सूचक निर्यात र छन् आयात कोटा। निर्यात कोटा - जीडीपी गर्न सामान र सेवाहरू को निर्यात को अनुपात। यसको स्पष्ट आर्थिक अर्थमा: निर्यात भएको छ गार्हस्थ्य उत्पादनको के अनुपात। त्यस्तै जीडीपी गर्न सामान र सेवाहरू को आयात को अनुपात रूपमा आयात कोटा परिभाषित। यसको उद्देश्य - घरेलू खपत मा आयोत को भाग देखाउन।
तसर्थ, माथि कोटा निर्यात र यसको आर्थिक गतिविधिहरु देशहरूमा आयात के अनुपात देखाउँछ।
व्यापार सन्तुलन - आफ्नो निरपेक्ष मान बाहेक, विदेशी आर्थिक गतिविधि को राज्य को प्रधान दाता वा प्राप्तकर्ता वर्ण अर्को सूचक characterizes। यो कुल निर्यात र आयात बीचको फरक छ। देश को आयात सामान र सेवाहरू को उत्पादन मा लाभ को कमी प्रतिनिधित्व गर्दछ। निर्यात पनि उल्टो अवस्था, गर्न पोइन्ट जब यो लागत-प्रभावकारी र होनहार बनाउन सामान र सेवाहरूको उत्पादन।
निर्यात र आयात बीचको फरक सकारात्मक छ भने, त्यसपछि एक विपरीत मामला मा विदेशी व्यापार को सकारात्मक ब्यालेन्स बताइएको - नकारात्मक। राज्य को गतिशील उत्पादन क्षमता विदेशी व्यापार कारोबार सकारात्मक ब्यालेन्स देखाउँछ। हामी देख्न सक्छौं रूपमा, देशको आयात र निर्यात को ब्यालेन्स आर्थिक विकास को दिशा को एक महत्वपूर्ण सूचक हो।
निर्यात को राज्य उत्तेजक
अक्सर, राज्य आफ्नो निर्यात को पदोन्नति को लागत वहन। यस्तो भ्याट फिर्ता रूपमा, निर्यातकहरु कर लाभ को लागि धेरै देशहरूमा गर्ने। परंपरागत, कृषि उत्पादन लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्यात सब्सिडी। विकसित देशहरू सबै कृषि उत्पादनहरु को प्रत्याभूति खरिद प्रदान, आफ्नो किसानहरु मदत छैन। यसको निर्यात थप - राज्य को समस्या छ।
यसबाहेक, निर्यात प्रवर्धन र संधै वृद्धि आयात गर्न जान्छ। मध्यवर्ती विनिमय दर साधन यहाँ देखिन्छ। निर्यात सब्सिडी राष्ट्रिय मुद्रा को दर, क्रमशः, यो आयात किन्न थप लाभदायक हुन्छ बढ्छ।
त्यो आयात र निर्यात समावेश गर्दैन?
यो सामान र सेवाहरूको प्रवाह विदेश उद्देश्य वा किनभने "vsploshnuyu" गणना छैन को, र केही विभाग को अपवाद संग उल्लेख गर्नुपर्छ:
- ट्रान्जिट सामान;
- अस्थायी निर्यात र आयात;
- देश मा हो वा विदेश बस्ने बासिन्दा बेचिएको गैर-बासिन्दा द्वारा खरिद;
; बिक्री वा गैर-वसोवास बासिन्दा द्वारा perpetrated भूमि खरिद -
- सम्पत्ति पर्यटकहरु।
Protectionism र विश्व व्यापार
यो राज्य मुक्त व्यापार सिद्धान्त Paramount छ: कहाँ उत्पादन लागत कम गर्दै छन्, उत्पादन एक विशेष उत्पादन हुनुपर्छ? एक हात मा, दृष्टिकोण स्रोतको सर्वोत्कृष्ट निर्धारण प्रदान गर्छ। साथै, प्रतियोगिता निर्माताहरु जबरजस्ती छ तेजी आफ्नो प्रविधिको सुधार गर्न।
तथापि, अर्कोतर्फ, मुक्त व्यापार सधैं छ प्रत्येक देश को सन्तुलित राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था उत्पादन गर्छ। कुनै पनि राज्य, मधुर स्वर आफ्नो उद्योग विकास गर्न प्रयास गर्ने "बेफाइदा" केहि सामान को उत्पादन विजयी। को रक्षा उद्योग, नयाँ उद्योग विकास, रोजगारी सुनिश्चित गर्न आफ्नो उद्योग को स्पष्ट सान्दर्भिकता। तसर्थ, हामी सरकार सधैं निर्यात र आयात संरचना नियमन छ भनेर भन्न सकिन्छ।
त्यहाँ कृत्रिम कोटा र कर्तव्य को रूप मा "मौका लागत", लाभदायक उच्च मूल्य र सस्ता आयात गर्न योगदान को एक protectionist संयन्त्र छ। कारण कोटा र वृद्धि protectionist शुल्क विश्व अर्थव्यवस्था को सुरिलो विकास बाधा भन्ने तथ्यलाई गर्न, छैन पनि दूर तिनीहरूलाई द्वारा लगे गर्नुपर्छ।
को bureaucratic prohibitions, गुणस्तर स्तर को biased प्रस्तुति र, अन्तमा, प्रशासनिक नियमन लाइसेन्स सिस्टम: तथापि, "व्यापार युद्ध" को अभ्यास अर्को, आयात कम को गैर-महसुल विधिहरू संकेत गर्छ।
देशको व्यापार नीति
देश मा आयात शुल्क र मात्रात्मक प्रतिबन्ध औसत स्तर आधारमा व्यापार नीति चार प्रकार भेद।
खुला व्यापार नीति व्यापार कर को स्तर द्वारा विशेषता छ, आयात उत्पादनहरु को संख्या मा स्पष्ट प्रतिबन्ध को अभाव मा 10% भन्दा बढी छैन। मध्यम व्यापार नीति 10-25% को खुद्रा शुल्क, साथै वस्तुहरु को ठूलो को 10-25% आयात मा गैर-महसुल प्रतिबन्ध को स्तर पारस्परिक रहेको छ। रोकटोक नीतिहरू एक महत्वपूर्ण गैर-महसुल व्यापार रूपरेखा र कर्तव्य द्वारा विशेषता छ - 25-40% को स्तर मा। राज्य अनिवार्य छ भने एक उत्पादन को आयात निषेध गर्न खोज्ने, यो मामला मा, दर 40% भन्दा बढी छ।
सबै भन्दा विकसित देशहरूमा सामान्य साइन व्यापार नीति - को आफ्नो विशिष्ट वजन को बढ्दै र राज्य आयात र निर्यात सेवाहरू द्वारा उत्साहित।
रूस अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कस्तो देखाउँछ?
रूस अर्थव्यवस्था उत्पादन र तेल र ग्याँस को निर्यात केन्द्रित, विशेष छ। यो पश्चिमी देशहरूमा कारण मुख्यतः खानी उद्योग को उत्पादन को लागि माग। रूस को निर्यात र आयातको वर्तमान संरचना, पाठ्यक्रम, छैन देश अन्त छ, त्यो बाध्य भएको थियो - वैश्विक आर्थिक संकट को एक युग मा। को चित्रमाला मा यस्तो अवस्थामा हरेक देश आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गर्न।
यो चरण मा रूस को "ट्रम्प कार्ड" भर्खर तेल र ग्याँस छन्। यो मामला हो भनेर पहिचान गर्नुपर्छ र किनभने संबंधी बाधाओं को, ईन्जिनियरिङ् उत्पादनहरु को निर्यात लागि पश्चिमी देशहरूमा "माथि लहरै"। तसर्थ, यस प्रकारको निर्यात को एक संरचना, यो एक पछाडि देश थियो भने।
एकै समयमा रूस कृषि विकास लागि धेरै भूमि, खनिज, वन विज्ञान, अवस्था छ। सैन्य-औद्योगिक जटिल अन्तर्राष्ट्रिय बजार हतियार र सैन्य उपकरण मा प्रतिस्पर्धी सिर्जना गर्छ। वर्तमान मा, रूस यसको उद्योग विविधता र वैश्विक व्यापार वातावरण यसको निर्भरता कम गर्न सुरक्षा संयन्त्र उठाउँछ। निर्यात र रूसी संघ को आयात, ताकि यसको कन्फिगरेसन परिवर्तन हुनेछ।
22.08.2012 मा, रूस को WTO को सदस्य भए। लामो यो इच्छा भन्सार कर्तव्य र महसुल कोटा को दर मा परिवर्तन को रूप मा यो थप प्राथमिकताहरू। मा जनवरी-जुन 2013 404 600 000 000 USD रूस विदेशी व्यापार कारोबार (2012 मा नै अवधिको लागि - 406.8 अरब डलर) .. आयात, 150,5 अरब डलर राशि निर्यात गर्दा - 253,9 अरब डलर।
हामी सम्पूर्ण 2013 को लागि खाता जानकारी ले भने, वर्ष को दोस्रो आधा पहिलो भन्दा धेरै कम प्रभावकारी छ रूसी विदेशी व्यापार गतिविधि लागि बाहिर गरियो। उत्तरार्द्ध वास्तवमा धेरै 10.5 रूपमा% विदेशी व्यापार कारोबार को ब्यालेन्स मा कमी प्रतिबिम्बित थियो।
र इन्धन ऊर्जा स्रोतको रूसी निर्यात को कुल वजन बारेमा 74,9% छ। कारण धेरै कारक पछिल्लो वर्ष मा निर्यात मा गिरावट को कारण। रूस तेल र ग्याँस एक प्रमुख निर्यातक छ। यसलाई कच्चा तेल को 75% निर्यात भएको छ कि ज्ञात छ र 25 मात्र% आर्थिक जटिल प्रदान गर्नुहोस्। तेल र ग्याँस - उत्पादन, मूल्य, जो को बजार उतार चढाव गर्न subjected। यूराल तेल 2013 मा निर्यात, रूस 2.39% मा यसको मूल्य घट्यो, वर्ष 2012 संग तुलना छ मात्र छैन, तेल निर्यात को कुल मात्रा 1.7% घट्यो। पनि यूरोजोन संकट र बन्देज खडा WTO तंत्र बताए। विदेशी व्यापार गत वर्ष को प्रवृतिमा सामान्य गिरावट को रूस गार्हस्थ्य उत्पादनको 3.4% देखि 2013 मा 1.3% गर्न 2012 मा वृद्धि मा एक कमी सँगसँगै थियो। खैर, 32-33% लागि तेल र ग्याँस खाता रूस गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचना मा।
मशीनरी र उपकरण को रूसी निर्यात को शेयर मात्र 4.5%, उद्योग को सम्भावित, न त वैज्ञानिक आधार को स्तर अनुरूप जो छैन। एकै समयमा, विकसित देशहरुमा द्वारा विश्व व्यापार मा यो खण्ड को शेयर 40% छ।
इतिहास रूस मा यो बिन्दुमा कारण बिकृति अर्थव्यवस्था (माथि ढाकिएको थियो) मुख्य रूप उत्पादन समाप्त आयात गर्न छ।
सीआईएस देशहरुमा मशीनरी र उपकरण को रूसी आयात को शेयर 36.1% छ। यसरी आफ्नै उत्पादन को कमी द्वारा अफसेट (2013 मा रूस जीडीपी मा मशीनरी र उपकरण को शेयर 3.5% छ)। 12.5% इन्धन - - 7%, कपडा र जुत्ता - 7.2%, रासायनिक उद्योग उत्पादनहरु - 7.5% अनुपात आयात धातु र आफ्नो उत्पादन 16.8%, आफ्नो उत्पादन को लागि खाद्य उत्पादनहरु र सामाग्री छ।
यसरी, रूस को आयात र निर्यात विश्लेषण, हामी यसको औद्योगिक र सामाजिक विकासमा कृत्रिम मंदी बारेमा निष्कर्षमा आउँछन्। यो अवस्थाको स्रोत केही व्यक्तिहरूको आत्मपुरक चासो को सर्कल छ कि स्पष्ट छ।
विदेशी व्यापार जापान
को बढ्दो रवि को अर्थव्यवस्था भूमि - संसारमा सबैभन्दा विकसित र गतिशील को एक। निर्यात र जापानी संरचित आयात र परिभाषित शक्तिशाली अर्थव्यवस्था। यसको औद्योगिक सक्छ यो राज्य अब संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन पछि संसारमा तेस्रो रैंकों। देश को स्रोत आधार एक सुविधा अत्यन्तै संगठित र कुशल काम शक्ति र देश खनिज को भर्चुअल अभाव छ। स्थान वर्णन र पर्यावरण अवस्था यसको आवश्यकता को 55% को स्तर मा देशको कृषि उत्पादन सुनिश्चित को संभावना सीमित।
देश रोबोटिक्स, इलेक्ट्रनिक्स, मोटर वाहन र यांत्रिक को विकास को Forefront छ। जापान संसारमा सबै भन्दा ठूलो माछा मार्ने छिटो छ।
हामीलाई जापान को निर्यात र आयात छोटकरीमा विचार गरौं। आयात, हामी पहिले नै उल्लेख, भोजन, खनिज, धातु, ईंन्धन, रासायनिक उत्पादनहरु रूपमा। निर्यात इलेक्ट्रनिक्स, विद्युत ईन्जिनियरिङ्, मोटर, विभिन्न वाहनहरु, रोबोटिक्स।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार को सदस्यको रूपमा चीन
वर्तमान मा, चीन एक enviable गतिशीलता देखाइएको छ। आज संसारमा दोस्रो अर्थव्यवस्था छ। विश्लेषकहरूले अनुसार, 2020 मा 2015 देखि अवधि मा पीआरसी संयुक्त राज्य अमेरिका लाग्नेछन् गर्नुपर्छ र 2040 सम्म आफ्नो निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको भन्दा तीन पटक थप शक्तिशाली बन्न। संसाधन, आज चिनियाँ अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ (कुशल सहित) श्रम को प्रशस्त, खनिज, भूमि र अरूको उपस्थिति छ।
निर्यात र आज चीन आयात औद्योगिक चरित्र बोकेका, निर्धारित देश को नीति। यो देश आज - धातु (इस्पात, जस्ता, निकल, मोलिब्डेनम, Vanadium) को औद्योगिक उत्पादन मा एक निरपेक्ष नेता, घरेलू उपकरण (पीसी, टीवी, वाशिंग मिसिन र सिलाई मिसिन, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर, क्यामेरा, हेर्छ)। साथै, मिति गर्न मोटर गाडी उत्पादन, चीन संयुक्त राज्य अमेरिका र जापान संयुक्त overtaken छ। यसको आफ्नै "सिलिकन भ्याली" पनि Haidian जिल्ला बेइजिङ नजिकै निर्माण गरेको छ।
चीन के आयात छ? प्रविधि, शिक्षा सेवा, विशेषज्ञहरु, विकसित देशहरुमा, नयाँ सामाग्री, सफ्टवेयर, र जैव आपूर्ति। चीनको निर्यात र आयात को विश्लेषण स्वयंसमर्थता र यसको आर्थिक रणनीति को गहिरो समझ प्रमाणित गर्छ। निर्यात र यी देशहरूको आयात आज सबैभन्दा सशक्त वृद्धि गतिशीलता हो।
अष्ट्रेलिया को निर्यात र आयात
अष्ट्रेलिया को निर्यात र आयात यसको आफ्नै विशेष छ। एकल एकात्मक राज्य हो जो पाँचौं महादेशमा, एक शक्तिशाली भूमि र कृषि स्रोतहरू छ र मासु, अन्न, ऊन अनुमति दिन्छ। तर एकै समयमा यस देश को बजार त्यहाँ श्रम र लगानीको कमी छ।
एउटा सक्रिय निर्यातक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रेरित मा नै समय अष्ट्रेलिया मा। हाल को वर्ष मा तथ्याङ्क अनुसार, देश को कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको% 25 सामान र सेवाहरू को निर्यात रूपमा बुझे छ। कृषि उत्पादन (50%) र खानी उत्पादनहरु (25%) को अष्ट्रेलिया निर्यात।
अष्ट्रेलिया को सबै भन्दा ठूलो निर्यातक - जापान र सबै भन्दा ठूलो आयातकर्ता - अमेरिकी।
अष्ट्रेलिया गरेको अर्थव्यवस्था आयात मा निर्भर हुन मानिन्छ। पाँचौ महादेशमा मा के ल्याउन? 60% - र उपकरण, खनिज, खाद्य उत्पादनहरु।
ऐतिहासिक, अष्ट्रेलिया नकारात्मक छ व्यापार सन्तुलन, तर, यो बिस्तारै घट्छ। आयात र देश को निर्यात लगातार र आरोही विकास गरिएको छ।
भारत निर्यात र आयात
भारत दक्षिण एसियामा धेरै राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव छ। देश विश्व बजार मा सक्रिय विदेशी व्यापार गतिविधि पछि लाग्दा छ। 2012 मा जीडीपी जो संसारमा4औं स्थानमा छ, 4,761 ट्रिलियन डलर अप गरेको छ! भारतको विदेश व्यापार को मात्रा प्रभावशाली छ: 90 को दशक मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको 16% थियो, अब - 40% भन्दा! आयात र भारत को निर्यात तेजी बढ्दै छन्। श्रम अन्तरराष्ट्रिय विभाजन मा राज्य को लाभ एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन, विशाल क्षेत्रमा छन्। उद्योग मा - सेवा क्षेत्र, 14% मा - थप काम जनसंख्या कृषिमा संलग्न, तीस प्रतिशत आधा भन्दा।
भारत कृषि - चामल र गहुँ चिया (200 मिलियन टन), कफी, मसला को निर्यात को स्रोत (120 हजार टन।)। तर, हामी संसारको कृषि को सबै अन्न को खेती मूल्याङ्कन र भारत को एक बाली संग तुलना गर्न भने हामी भारतीय कृषि क्षेत्रको प्रदर्शन दुई पटक कम छ कि पाउन। यो खाद्य उत्पादनहरु यो देश सबैभन्दा ठूलो निर्यात आय ल्याउन हो भनेर जोड दिए गर्नुपर्छ।
भारत - कपास, रेशम, उखु, बदाम को सबै भन्दा ठूलो आयातकर्ता।
मासु उत्पादनहरु को भारतीय निर्यात को रोचक सुविधाहरू। यो राष्ट्रिय mentality को प्रभाव महसुस गरे। भारत - त्यहाँ एक गाई हो किनभने सबै भन्दा ठूलो संसारमा गाई को, संख्या, तर मासु दुनिया खपत मा सानो एक पवित्र जनावर हो।
कपडा उद्योग भारत 20 लाख मानिसहरूलाई रोजगार प्रदान गर्दछ। भारत वस्त्र, पेट्रोकेमिकल्स, बहुमूल्य पत्थर, फलाम र इस्पात, यातायात, रासायनिक उत्पादनहरु बाहेक निर्यात। कच्चा तेल, बहुमूल्य पत्थर, मल, मशीनरी को आयात गर्छ।
अंग्रेजी यो देशमा शिक्षित मानिसहरू आईटी-क्षेत्र र कार्यक्रम मा आफ्नो आला फेला दिनुभयो। अब निर्यात र अर्थव्यवस्था को यस क्षेत्र मा सेवाहरूको आयात महत्वपूर्ण छ र भारतको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको 20% भन्दा छ।
भारत सबैभन्दा ठूलो निर्यातकहरु संयुक्त राज्य अमेरिका, हो संयुक्त अरब एमिरेट्स, चीन। भारत, संयुक्त अरब एमिरेट्स, चीन, साउदी अरब देखि नै सामान आयात।
साथै, देश 1974 देखि एक महत्वपूर्ण सैन्य-औद्योगिक जटिल, आणविक हतियार संग छ। 1962 मा चीन र पाकिस्तान संग शान्ति-मायालु भारत सीमा विवादमा 1965 मा को हार पहिलो सक्रिय हतियार आयात गर्न, र त्यसपछि आफ्नो बनाउनुहोस् देश बाध्य। फलस्वरूप, 1971 मा, यो एक पत्यार पार्र्ने विजय पाकिस्तान लियो। को 90 को दशक को मध्य देखि, भारत ठूलो शक्ति राजनीति धारण।
हामी यस लेखमा बाट देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, विभिन्न राज्य उनको सम्बन्धित साधनहरु र निर्यात र आयात को संरचना को उत्पादक क्षमता चयन गर्नुहोस्।
यो निःशुल्क अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार यी दिन आरोपबाट मा कीन्स सुरिलो योजना अक्सर बिकृति अमेरिका हो भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। यसको को स्तर मा विभिन्न देशहरूको सरकार आर्थिक नीति सक्रिय घरेलू निर्यात प्रवर्द्धन गर्न। र अक्सर प्रज्वलित र परिष्कृत रणनीति लडाई को reminiscent यो प्रतियोगिता। कसले यसलाई जित्छ? औद्योगिक उत्पादन को ठूलो मात्रा उत्पादन कि देश। तसर्थ, अर्थशास्त्रियों औद्योगिक नीति को remake बारेमा आज भन्न।
प्रश्न: "? आज देश को लागि रुचि रणनीति छ के" अर्को वास्तविक macroeconomic अवस्था छ: यसको विदेशी मुद्रा भंडार बचत, देश, निर्यात विस्तार गर्ने खोज्ने निर्यात राजस्व भित्र यसको आयात सीमित। यो गर्न, त्यो भविष्यमा कारक कम विदेशी मुद्रा आय को जोखिम बोक्न उल्ट्याउन खोज्छ। को कारक के हो? विनिमय दर, तेल, ग्याँस, अति लोचदार मांग को बिक्री दर। को XXI सताब्दी को शुरुवात अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार को दुनिया को वस्तु यसको चिन्ह बाँकी छ। निर्यात-आयात सञ्चालनका कुल मात्रा, एक महत्वपूर्ण साझेदारी (30%) व्यापार मा सेवाहरूमा संलग्न छन्।
कसरी चीन देखि प्याकेज आउँछ? प्रश्न निष्क्रिय छैन
TIR ट्रक: यो अर्थ के हो? TIR अन्तर्गत कार्गो को गाडी को लागि नियमहरु
घरमा टाटु कसरी प्राप्त गर्न
अन्वेषकहरूको - छ ... को 17 औं सताब्दी को रूसी अन्वेषकहरू
मध्य एशिया मा स्विट्जरल्याण्ड - को ताजिकिस्तान पर्वतहरू
Karakoram पहाड दायरा (मध्य एशिया)
स्विच: यो के हो? स्विच सर्किट र दोष व्यवस्थापन
किनमेल भ्रमण: ग्रीस देखि ल्याएको
बाल सदन परियोजनाहरू
के मद्दत गर्छ, "एस्पिरिन" र "एस्पिरिन कार्डियो" मा बारेमा थप जान्न